के हजुरपनी बिदेशमा हुनुहुन्छ? सोच्नुस हजुर को कमाई सहि ठाउमा प्रयोग भएको त छ? | नेपालको सम्झना
Browse » Home » रोचक जानकारी » के हजुरपनी बिदेशमा हुनुहुन्छ? सोच्नुस हजुर को कमाई सहि ठाउमा प्रयोग भएको त छ?
के हजुरपनी बिदेशमा हुनुहुन्छ? सोच्नुस हजुर को कमाई सहि ठाउमा प्रयोग भएको त छ?
(रबिन्द्र भट्टराइ संगको कुराकानीमा आधारित अनलाइनबाट )
0 comments to “के हजुरपनी बिदेशमा हुनुहुन्छ? सोच्नुस हजुर को कमाई सहि ठाउमा प्रयोग भएको त छ?”